🥇 ▷ Injineer Isbaanish ah ayaa u beddelaya seenyaalaha 'WiFi-ka' koronto ✅
Injineer Isbaanish ah ayaa u beddelaya seenyaalaha ‘WiFi-ka’ koronto
The durbaan Waa mid ka mid ah caqabadaha soo-saareyaasha soo saara taleefannada dillaaca ee sanadka cusub. Suuqa kama jiro suuq ka xor ah habaarkan. Awood, nashqadeyn iyo kamarado badan laakiin wali waxaan ku qasbanahay inaan ku dallacno taleefanka gacanta maalin kasta. Telefonka casriga ah ayaa jiidaya xaddidaadda tamarta La’aanteed waxaan sameyn karnaa wax walba si aan uga hor tagno. Ama ugu yaraan ilaa hadda. Sababtoo ah qiyaasi in dhowaan taleefannada gacanta, laptops, kiniiniyada ama saacadaha smart ay shaqeyn doonaan iyada oo aan batari lahayn.
Koox cilmi baarayaal ka ah Machadka Teknolojiyadda Massachusetts (MIT, ee Mareykanka), oo ay hoggaamiyaan Injineer Isbaanish ah Tomás Palacios, ayaa lagu soo bandhigay joornaalka Nature tallaabada ugu horreysa ee jihadaas la abuurista anteenaha ugu horreeya ee awood u leh u beddelashada signalada gudbinta Wi-Fi koronto Waxay dib u isticmaali kartaa aaladaha. Kacaan dhan tikniyoolajiyadeed oo dunidan ku shaqeeya koronto la’aan.
Tomás Palacios waa mid ka mid ah hogaaminaya saynisyahano ku xeel dheer cilmiga qalabka cusub iyo borofisar muddo toban sano ah ka qaatay Machadka Teknolojiyada Massachusetts – jaamacadda sharafta leh ee Mareykanka halkaas oo ay ka mid tahay iskuulada injineeriyadda ugu fiican adduunka iyo halkaasoo in ka badan 70 abaalmarinno ah oo abaalmarinta Nobel lagu siiyay, ay ka mid yihiin qalin jabiyayaashii iyo aqoonyahanadii. Hada wuxuu hogaaminayaa cilmi baaris caalami ah asxaabtiisa oo ka kala socda jaamacada UPM, Carlos III ee Madrid, Boston iyo South Carolina. Waxay higsaneysaa in Wax kasta oo nagu wareegsan ayaa ku xidhan oo iskii isu quudin kara. “Xaaladda degdegga ah ee hadda jirta waa in la helo sida loo badbaadiyo tamarta,” ayuu Injineerku ku yidhi wareysi uu siiyay wargeyskan.
Anteeno qaas ah – qaade – wuxuu soo qaadaa digniinta wireless-ka wuxuuna u beddelaa ku beddelankeeda hadda mid joogto ah. Qorayaashu waxay isticmaalaan anteeno ah Roobab dabacsan oo la qabsan karo si loo qabto hirarka Wi-Fi. Kadib, calaamadaada AC-ka waxaa loo diraa a molybdenum aad u wanaagsan burburi kara semiconductor (MoS2) – mid ka mid ah kuwa ugu ugu caansan dunida, oo leh kaliya seddex atom qaro weyn – oo u beddelaya hadda si toos ah sidaas awood u yeelan karaa wareegga elektiroonigga ah.
Waa aaladdii ugu horreysay ee dabacsan oo beddeli karta talantaallilada hadda jira ee calaamadaha Wi-Fi si joogto ah u noqda aaladda korantada
In sidan, Aaladda aan batteriga ku xirnayn waxay si isdaba joog ah u qabsan karaan una beddelayaan calaamadaha Wi-Fi, taas oo sii kordheysa daadadku meelo badan oo nagu wareegsan, oo ah ilo waxtar leh oo cunto ah. Intaa waxaa u dheer, waxay leeyihiin faa’iidooyinka la-beddelka iyo waxa lagu soo saari karaa duub si ay u daboolaan aagagga aad u ballaaran.
“Maxaa dhici kara haddii aan horumarin karno nidaamyo elektiroonig ah oo awood u leh inuu daboolo buundo, waddo ama darbiyada xafiiskayaga, oo aan u soo qaadanno sirta elektaroonigga ah wax kasta oo nagu wareegsan? Sideen awood ugu siin karnaa aaladaha elektiroonigga ah? ”Ayuu yidhi Tomás Palacios, qoraa isku-dhaf ah iyo borofisar ka tirsan waaxda injineeriyada korantada iyo sayniska kumbuyuutarka ee MIT.
Waxaan diyaarinay a hab cusub oo lagu xoojiyo nidaamyada elektiroonigga ah ee mustaqbalka – Qoraallada Palacios – adoo ku qabanaya tamarta Wi-Fi hab si fudud loogu dhex dari karo aagagga waa weyn si caqligaas loo keeno shay kasta oo nagu wareegsan.
MIT / UPM
Codsiyada ugu horeeya ee dib u hagaajinta cusub waxaa ka mid ah bixinta korantada aaladaha elektroniga ee dabacsan, aaladaha la qaadan karo Y dareemayaal waxa loogu yeero internet-ka waxyaalaha. Telefoonnada casriga ah o Foomamka casriga ah ee dabacsan, tusaale ahaan, waa suuq cusub oo loogu talagalay shirkadaha waaweyn ee teknolojiyadda.
Tijaabooyinka ay kooxdu sameysay, waa la caddeeyay taas Aaladdaadu waxay soo saari kartaa ku dhawaad ​​40 microatts oo awood ah markii ay u soo baxaan heerarka caadiga ah ee calaamadaha Wi-Fi. (qiyaastii 150 microwatts). Taasi waa wax ka badan ku filan in lagu iftiimiyo shaashadda moobaylka ama guntin silikon ah.
Codsi kale oo suurtogal ah waa in la sameeyo tamar loogu talagalay gudbinta xogta aaladaha caafimaad ee la isticmaali karo, ayuu yidhi. Ciise Grajal, sidoo kale wada-qore iyo borofisar ka dhiga Jaamacadda Polytechnic ee Madrid (UPM). Xaqiiqdi, cilmi baarayaashu waxay soo saarayaan kiniinno ay dhimi karaan bukaannada ayna awood u leeyihiin inay gudbiyaan xogta ku saabsan caafimaadkooda si loogu diiwaan geliyo kumbuyuutar loona sameeyo baaritaanno. “Sida habboon, ha u isticmaalin baytariyada inaad ku xoojiso nidaamyadan maxaa yeelay haddii ay lumiyaan lithium, bukaanku wuu dhiman karaa,” ayuu yiri Grajal. “Waxa aad ufiican in laga soo ururiyo tamarta deegaanka si loo rogo sheybaaradahan yar-yar ee jirka ka jira oo xogta loogu gudbiyo kombuyuutaro dibadeed.”
Injineerku wuxuu ku adkaysanayaa cusbooneysiinta daraasaddan: «Adeegsiga qalab elektiroonig ah oo dabacsan oo ku saleysan laba-geesood (MoS2 xaaladdan) si looga dhaliyo koronto laga soo bilaabo calaamadaha korantada ee deegaanka dhexdiisa, sida Wi-Fi iyo taleefannada gacanta. Sidaa darteed, tan Tamartu waa mid xaddidan oo xor ah».